Diso ny fanarenana ny fizahan-tany any Dominika? Ny Paradox an'i Simpson dia mijery ny fahamarinana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Repoblika Dominikana » Diso ny fanarenana ny fizahan-tany any Dominika? Ny Paradox an'i Simpson dia mijery ny fahamarinana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovao Mafana Repoblika Dominikana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Ny fiantraikan'ny areti-mandringana amin'ny fizahan-tany manerantany ary vokatr'izany eo amin'ny toekarena manerantany dia goavana. Ny anjara birikin'ny fizahan-tany amin'ny Global Gross World Product tamin'ny 2020 - $ 4.7 trillion - dia sahabo ho ny antsasaky ny an'ny 2019. Tamin'ny taratasy vao tsy ela akory izay, ny tale jeneraly miadidy ny fivorian'ny Firenena Mikambana momba ny varotra sy ny fampandrosoana (UNCTAD) dia nanombana fa amin'ny be indrindra toe-javatra tsara fanantenana, amin'ny faran'ny taona, ho 60% ambanin'ny 2019 isika.
Amin'ny fananana fizahan-tany zava-dehibe amin'ny toekarena manerantany, ny fanarenana amin'ny firenena rehetra dia zava-dehibe.
Vao tsy ela akory izay ny minisiteran'ny fizahan-tany Dominikanina dia nanolotra angon-drakitra milaza fa manana fanarenana miavaka ity sehatra ity.
Na dia marina aza ny angon-drakitra, ny fandikana dia mety hamela olona iray manontany ny famantarana ny fanarenana toy izany.
Tanjon'ny firenena rehetra ny famerenana amin'ny laoniny, satria ny fizahan-tany dia singa iray lehibe amin'ny toekarena manerantany, fa indrindra ireo manana fizahantany ho singa lehibe amin'ny toekarena.
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay, Ministeran'ny fizahan-tany Dominikanina nanolotra angon-drakitra hanaporofoana ny fahitana marim-pototra sy marina ny fizahantany Dominikanina tonga. Marina ny angona, fa ny fandikana azy ireo dia mitaky famakafakana izay mametraka jiro sy aloky ny fisian'ity fanarenana ity, miorina amin'ny angon-drakitra manerantany izay manangona tahirin-kevitra sasany amin'ny toetra samy hafa.
Nandritra ny dimam-polo taona, nisy ny fanadihadiana iray nodinihina izay raha ny marina dia tsikaritra efa zato taona lasa izay, ny mifanohitra amin'izay nataon'i Simpson. Ny fehin-kevitra diso dia mety hitranga rehefa manangona tahirin-kevitra tsy homogène ny statistika. Raha tsy miditra amin'ny antsipiriany momba ny teôria matematika ity dia mahita izahay fa mamela ny hahatakatra fetran'ny fandikana angon-drakitra ataon'ny minisiteran'ny fizahan-tany Dominikanina, ny tahirin-kevitra, izay averinay hialana amin'ny tsy fahazoan-kevitra, dia tsy anontaniana.
Ny maha-zava-dehibe ny fahazoana ireo fetra ireo dia tsy mila fanamarinana ao amin'ny firenena iray, tamin'ny taona 2019, tamin'ny alàlan'ny fidiram-bola vahiny, ny fizahan-tany dia nitondra 8.4% ho an'ny harin-karena faobe, maneho ny 36.4% amin'ny fanondranana entana sy serivisy. Ankoatr'izay, ny fizahan-tany, na eo aza ny fihenan'ny 13% raha oharina amin'ny taona 2018, dia nandray anjara tamin'ny 2019% teo ho eo amin'ny fampiasam-bola mivantana.
Noho ireo antony ireo dia fanamarinana am-pitandremana ny fanambarana izay any amin'ny Repoblika Dominikanina, ny sehatry ny fizahan-tany dia mamela azy ny krizy ateraky ny areti-mandringana COVID-19 izay fototr'ireo politikam-panjakana eto amin'ny firenena, ary koa mba hitarihana ny fanapaha-kevitra momba ny toekarena bitika ataon'ny mpiasan'io sehatra io.
Andeha hotadidintsika ireo angon-drakitra notononin'ny Minisitera:
- Ny fahatongavan'ireo tsy an'habakabaka tamin'ny alàlan'ny rivotra, tamin'ny volana aogositra tamin'ity taona ity, dia maneho ny 96% amin'ireo ao amin'ny 2019, fironana iray hafa nohamafisin'ny zava-nitranga tamin'ny tapaky voalohan'ny volana septambra.
- Ity fironana ity dia nohamafisin'ny fandalinana isam-bolana ny famerenana ity mari-pamantarana ity taorian'ny fanarenana. raha oharina amin'ny taona 2019, dia nitombo hatrany, nanomboka ny 34% tamin'ny volana janoary-febily, hatramin'ny 50% tamin'ny martsa-aprily, hatramin'ny 80% tamin'ny Mey-Jona ary 95% tamin'ny Jolay-Aogositra.
- Ny fahatongavan'ireo mponina tsy Dominikanina dia nitombo tsy tapaka nandritra ny folo volana.
- Ny isan-jaton'ny mpizahatany mijanona ao amin'ny hotely dia 73%.
Izy rehetra dia angona marina sy voarakitra an-tsoratra. Na izany aza, mampahatsiahy antsika i Simpson fa miresaka santionany manangona vondrona samihafa sy vanim-potoana samihafa izy ireo.
Ny fandalinana ankapobeny ny vanim-potoana dia ho marina raha nisy ny fitoniana amin'ny fahatongavana amin'ny ambaratonga isam-bolana amin'ny vanim-potoana voafidy ho an'ny fampitahana. Tsy izany no izy, ary ny volana amin'ny 2019 dia tsy mitovy amin'ny fampitahana toy izany tamin'ny 2021. Tamin'io taona io, ireo mpandraharaha mpizahatany dia nanohina ny vokatry ny fahafatesan'ireo mpizahatany sasany teo anelanelan'ny Mey sy Jona, izay nampivadika ny fitomboan'ny fizahan-tany any Amerika Avaratra voarakitra tamin'ny tapany voalohan'ny taona (efa ho 10%) dia nilatsaka ny 3% nandritra ny folo volana voalohany (4% raha toa ka totalin'ny fahatongavan'ny vahiny no raisina).
Izany dia mitaky fanavahana ny habetsak'io 96% io amin'ny volana aogositra na ny 110% mahery mandritra ny tapa-bolana voalohany amin'ity volana ity noho ny fanarenana ny isa (2021 tonga) ary ohatrinona ny fihenan'ny denominator (tonga 2019).
Io vokany io dia mavesatra indrindra raha ny fahatongavan'ireo tonga dia miorina amin'ny singa iray hafa amin'ny tsy fitoviana, manavaka ny an'ny tsy Dominikanina tsy mponina amin'ny an'ny vahiny.
Izahay dia manao izany amin'ny tabilao manaraka izay anoloranay izany data, mandritra ny volana Janoary-Aogositra, manomboka amin'ny 2013.
taona 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ireo tahirin-kevitra ireo, raha tsy miahiahy ny fampitahana nataon'ny minisitera tamin'ny volana aogositra, dia nanova ny habeny, satria nandritra ny valo volana dia 60% ny isan'ireo tonga tamin'ny taona 2019 ary tsy maintsy miverina amin'ny 2013 isika mba hahitana tarehimarika ambany . Ity fampitahana farany ity dia manondro ny angon-drakitra ankapobeny, fa raha toa ka ny saina vahiny fotsiny no ampiasaintsika dia hanome 53% izany raha ampitahaina amin'ny 2019 ary 72% raha oharina amin'ny 2013.
Zava-dehibe ny fiheverana ireo tsy vahiny monina satria ny olom-pirenena Dominikana tsy tompon-tany dia mety tsy dia mampiasa loatra ny serivisy fanampiny toy ny hotely, trano fisakafoanana, fitaterana. Ity fandinihana tsy dia manintona loatra ity dia tohanan'ny mponin'ny hotely, izay, na dia vahiny aza ny 86% amin'ireo izay ekena dia ambany noho io vola io, raha ny tantara kosa dia mitovy ny filaharana roa tonta.
Misy angona hafa tsy homogène mifandraika amin'ny fizahan-tany miditra izay tokony hampanahy. Ity angon-drakitra ity, aseho amin'ity tabilao manaraka ity, dia manondro ny fihenan'ny fahatongavan'ireo olona tonga mponina.
taona Amerika Avaratra Eoropa Amerika atsimo Amerika afovoany
Ny tahirin-kevitra tena manan-danja indrindra amin'ny fisaintsainantsika dia ny fitomboan'ny fizahan-tany any Amerika Avaratra miaraka amin'ny fihenan'ny Eropa. Raha ity data ity dia heverina miaraka amin'ilay mifandraika amin'ny zom-pirenena, izay nisy ny vokany tsy mivantana noresahintsika, dia toa tsy azo onena ny fiatraikany ratsy amin'ny fihenan'ny fizahan-tany eoropeanina noho ny fiakaran'ny fizahan-tany any Amerika Avaratra.
Ity vinavina ity dia tohanan'ny data Eropa ihany koa momba ny famerenana ny fifamoivoizana an'habakabaka eropeana. Ny fampitahana amin'ity fahavaratra sy tamin'ny taona lasa ity dia mampiseho fa ny 40% amin'ny fifamoivoizana 2019 ihany no tafaverina, miaraka amin'ny fanatsarana raha oharina amin'ny 2020, raha 27% ny fanarenana. Ary tokony ampiana fa ny fifamoivoizana an'habakabaka dia tsy mariky ny homogeneous ihany koa, satria tany Eropa dia nisy fanarenana kely ny fifamoivoizana izay hahaliana ny ankamaroan'ny Repoblika Dominikanina, ny sidina iraisan'ny kaontinanta. Raha ny tena izy, ireo izay tafarina tamin'ny ankapobeny dia ny sidina mora vidina intra-eropeana. Androany, izy ireo dia misolo tena ny 71.4% amin'ny totaliny, raha roa taona lasa izay dia 57.1% ihany no solontenan'izy ireo, ary tsy tokony hodian-tsy hita fa ireo toerana itadiavam-bola betsaka indrindra amin'ity vokatra ity, amin'ny lafiny sasany, dia misolo tena ny tolotra fizahan-tany any Karaiba.
Amin'ity iray ity dia tsy maintsy ampiana fa ny fepetra Eoropeana Green Pass dia tsy mankasitraka ny fizahantany any Eropa ihany koa satria ny vaksinim-paritra ampiasaina any amin'ny Repoblika Dominikanina, Sinovac dia tsy mamela ny Green Pass. Mety hampametra-panontaniana ihany io, saingy azo antoka fa misy fiatraikany amin'ny sehatry ny maso ivoho fizahan-tany, hany ka ny vokatr'izany dia mbola lavitra ny lalana alohan'ny hiverenan'ny fizahan-tany Dominikanina amin'ny ambaratonga alohan'ny pandemika.
Na izany aza, ny fanantenana ny fahasitranana ny toe-javatra talohan'ny areti-mandringana vokatry ny fifehezana ny areti-mifindra dia mety ho azo inoana ihany, ary na izany na tsy izany, dia toa tsy hitranga amin'ny fotoana fohy izany.
Midika izany fa, raha tsy manome lanja loatra ny fanatsarana teboka decimal vitsivitsy amin'ireo isan-jato ireo dia ilaina ny mieritreritra ny politika famerenana amin'ny laoniny mijery ny tapaky ny taona 2023.
Tatitra iray vao haingana nataon'ny World Travel and Tourism Council izay miaro ny hetsika mavitrika ataon'ny governemanta, toy ny fampiasam-bola sy fisarihana ny fampiasam-bolan'ny sehatra tsy miankina amin'ny fotodrafitrasa ara-batana sy nomerika ary ny fampiroboroboana ireo fizahan-tany manokana, toy ny fizahan-tany ara-pitsaboana na fizahan-tany MICE. Midika izany ny politika manerantany, tsy miankina amin'ny sehatra izay misy koa sehatra hafa eo amin'ny fiarahamonina.
Ny fandinihana toy izany dia noraisin'ny talen'ny jeneraly miadidy ny UNCTAD, roa volana lasa izay, nanitrikitrika ny tokony hamerenana amin'ny laoniny ny maodelim-pandrosoana fizahantany, hampiroborobo ny fizahan-tany nasionaly sy ambanivohitra ary hanao nomerika.
Ny fotodrafitrasa misy eto amin'ny firenena dia mamela ireo hetsika ireo, ary izany dia mitaky politika fampiroboroboana matanjaka, atambatra amin'ny sehatra tsy miankina, nefa tsy afa-po amin'ny zava-misy fa misy ny fanarenana. Ny zava-misy amin'ny faran'ity taona ity dia nisy 4.5 tapitrisa na 5 tapitrisa tonga, mbola kely raha oharina tamin'ny taona teo aloha, dia tsy hitondra fahasamihafana lehibe, raha tsy hoe misy fepetra noforonina mba hamelomana indray ny sehatra, hahafahan'ny firenena mitazona ny toerany voalohany amin'ny fizahantany Karaiba.